FBS မှ ငွေပြန်အမ်းခြင်း - lot တိုင်း ၁၅ ဒေါ်လာထိရယူလိုက်ပါ။
Bonus activate လုပ်ရန်
Bonus ပမာဏ Lot တိုင်းအတွက် ၁၅ ဒေါ်လာအထိ
Bonus အရောင်းအဝယ်ကာလ အကန့်အသတ်မရှိ
အခြေအနေများ Personal area တွင် activate လုပ်နိုင်သည်။
FBS သည် ဖောက်သည်များကို ဤကဲ့သို့ဝန်ဆောင်မှုပေးသော တစ်ခုထဲသော Forex broker ဖြစ်သည်။
သင့် Forexအမြတ်၏ အထွဋ်အထိပ်မှာထပ်ပေါင်းထည့်ပါ - သင့်ဝင်ငွေအား တိုးပွားရန် သင့်ပါစင်နယ်ဧရိယာတွင် ရိုးရိုးလေး တစ်ချက်ခြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့၏ အထူးသီးသန့် ငွေပြန်အမ်းသည့် ဝန်ဆောင်မှုအားအသုံးပြုလိုက်ပါ! FBSသည် ၎င်း၏ဖောက်သည်များထံ ငွေပြန်အမ်းသည့်အစီအစဉ် ကမ်းလှမ်းပေးသည့် တစ်ဦးတည်းသောပွဲစားဖြစ်သည်။
FBSတွင် ကျွန်တေ်ာတို့၏ ရောင်းဝယ်သူများအား အရောင်းအဝယ်ကို တတ်နိုင်သမျှ များများခံစားစေချင်သည်။ သင့်လုပ်ဆောင်မှုတွင် တုန့်ပြန်ချက်အနည်းငယ်ရှိတာ အမြဲတမ်းကောင်းပါသည် - အပိုငွေပုံစံဖြင့် တုန့်ပြန်ချက်သည် ပိုတောင်မှကောင်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်သူများအတွက် lot တိုင်းလျှင် ၁၅ ဒေါ်လာအထိရယူနိုင်မည့် ငွေပြန်အမ်းသည့်ဝန်ဆောင်မှုကို ဖန်တီးပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ lot တိုင်းလို့ပြောသည်မှာ၊ တကယ်ဆိုလိုတာပါ: ရှုံးသွားသည့်အော်ဒါတိုင်းအတွက်တောင်မှ ပြန်အမ်းငွေရပါသည်။
ယင်းသည် သင့်ပါစင်နယ်ဧရိယာတွင် အချိန်မရွေး အသက်သွင်းနိုင်သည့် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအမြတ်သည် အကန့်သတ်မဲ့ပြီး၊ သင်လစဉ် ရောင်းဝယ်သည့် ပျမ်းမျှစုစုပေါင်း ပမာဏပေါ်တွင်သာ မူတည်ပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုကို အချိန်အကန့်သတ်မဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သင်ရသည့် ပြန်အမ်းငွေသည် တကယ့်ပိုက်ဆံဖြစ်သည် - အကန့်အသတ်မလိုဘဲ မြန်ဆန်၊ လွယ်ကူစွာ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ သင်လုပ်ရမှာကတော့ သင့်ပါစင်နယ်ဧရိယာ ဆက်တင်ရှိ "ငွေပြန်အမ်းပေးခြင်း" ဝန်ဆောင်မှုကို အမှတ်ခြစ်ရုံသာ လိုအပ်ပြီး အထူးအားစိုက်ထုတ်မှုမလိုအပ်ဘဲ အပိုဆောင်းအမြတ်ကို ခံစားပါ။
သင့်ပုံမှန်လုပ်နေကြအတိုင်း ရောင်းဝယ်နေစဉ်အတွင်း ရောင်းဝယ်ခဲ့သည့် lotတိုင်းအတွက် $၁၅ အထိရယူပါ၊ တစ်လအတွင်း သင်ဘယ်လောက်ရနိုင်သလဲ တွက်ချက်ပါ - သင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အမြတ်ကို ကြည့်ရန် ကျွန်တော်တို့ ဂဏန်းပေါင်းစက်အားသုံးပါ!
သင့်ရဲ့ လစဉ်ပျမ်းမျှ စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏ
“ငွေပြန်ပေးခြင်း” အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို ရိုးရိုးလေးချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အထူးအားစိုက်စရာမလိုပဲ တစ်လ ၅၄၇ ဒေါ်လာ အပိုရရှိနိုင်မည်။
ငွေပြန်အမ်းခြင်းကို activate လုပ်ရန်